Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Dhismaha Empire State oo dhan ayaa loo qurxiyey fasaxyada
Farxadda Fasaxa ayaa si xawli ah uga socota Dhismaha Boqortooyada State (ESB) iyadoo astaanta astaanta u ah ay daaha ka qaadayso iibiyeyaasha maxalliga ah ee soo booda, qurxinta aadka u sarreeya, iyo qorshayaasha bandhigyada muusikada illaa dhammaadka sanadka.
Laga bilaabo maanta, dhismaha dariishada Fifth Avenue Lobby waxaa lagu qurxiyey muuqaalo fasax ah kuwaaso ka muuqda dahab, dhalaal, iyo muuqaal nacnac si loo xushmeeyo waqtiga ugu quruxda badan sanadka. Daaqadaha cajiibka ah waxaa ammaanay kuwa calaamadsan, nalalka fasaxa ee Art Deco lobby, ubaxyada, iyo geedka kirismaska ​​ee dhaadheer. Soo-booqdayaasha soo mara Lobby Avenue Fifth laga bilaabo Isniinta ilaa Jimcaha sidoo kale waxaa lagu soo dhaweyn doonaa heeso fasax ah oo ay sameeyaan pian-yaqaano xirfad leh laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 7 galabnimo
"Farxadda xilliga fasaxa waxaa laga dareemi karaa gees kasta oo ka mid ah waayo-aragnimadeena dib-u-eegista lagu sameeyay, laga bilaabo qurxinta cajiibka ah ilaa iibiyeyaashayada dabaaldega," ayuu yiri Jean-Yves Ghazi, oo ah madaxweynaha Kormeeraha Dhismaha Boqortooyada. "Waan ku faraxsanahay inaan ku soo dhawayno booqdayaasha khibrad dhab ah oo sixir ah inta lagu jiro wakhtiga ugu quruxda badan sanadka."
Toddobaad kasta illaa dhammaadka Noofambar, Dhismaha Empire State wuxuu iibin doonaa brews gaar ah - oo ay ku jiraan "View From the Top" Hazy IPA oo si gaar ah loogu iibiyo Dabaqa 86aad - iyada oo lala kaashanayo Craft+Carry iyo Five Boroughs Brewing Co. Kadibna sida ee Diisambar 2, DŌ, Cunnooyinka Cajiinka Kukiyada, cajiinka buskudka la cuni karo ee fadhigiisu yahay NYC iyo shirkad buskud, waxay qaadan doontaa Dabaqa 86aad iibiyaha Diseembar. DŌ waxay bixin doontaa lix fasax oo fasax ah iyo NYC-ku-daweyn oo ka socda gaadhiga sannad-guurada 90aad ee gaarka ah saddexda toddobaad ee ugu horreeya Disembar.
Menorah weyn ayaa soo dhaweynaysa martida marka ay soo galaan Dhismaha Boqortooyada Boqortooyada Midowday, iyo fursad sawir fasax ah oo ku yaal geeska Waqooyi-bari ee Dabaqadda Dabaqa 86aad sidoo kale waxay u ogolaataa martida inay qaataan sawiradooda fasaxa sanadlaha ah ee ugu caansan, asalka dhabta ah ee NYC. Qurxinta waxa ay ahaan doontaa in lagu soo bandhigo hoolka iyo inta lagu jiro waayo-aragnimada Kormeerka illaa Jan. 6.
Waayo-aragnimada Dhismaha Boqortooyada ee Gobolka waxay soo martay $165 milyan, dib-u-eegis kor-ilaa-hoos ah, kaas oo la dhammeeyey Diisambar 2019. Dib-u-habaynta waxaa ka mid ah albaabka martida ee gaarka loo leeyahay, madxafka immersive oo leh bandhigyo dhijitaal iyo taabto ah, iyo gebi ahaanba dib loo habeeyay Kormeeraha Dabaqa 102aad. Martidu waxay ka faa'iideysteen horumarinta tayada deegaanka ee hogaaminaysa warshadaha (IEQ) - sida filtarrada MERV 13 iyo laba-polarization firfircoon - kalsoonida martida. Kormeerka Dabaqa 86aad waxaa lagu rakibay laambadihii kulaylka ee heerkulku shaqaynayay si ay martida u diirranaadaan inta ay ku raaxaysanayaan vista jiilaalka ee ka imanaya wadnaha magaalada New York.
Nalalka munaaradda ee caanka ka ah adduunka ee dhismuhu waxay iftiimin doonaan inta lagu jiro xilliga fasaxa oo leh nalal gaar ah oo loogu talagalay Thanksgiving, Chanukah, Christmas, iyo Habeenka Sannadka Cusub.